D-Link Omna 180 HD, kamera yekuongorora yeKeKKK | IPhone nhau
Luis Padilla | | Apple zvigadzirwa, dzakawanda
Iine huwandu huri kukura hweHomeKit-inoenderana zvishongedzo, iyo yekutarisa kamera chikamu hachisi chaicho chimwe chezvakanyanya kuwanda muApple ecosystem. Ndosaka pakaziviswa kamera yeD-Link yaOmna 180 HD kuCES iyo yakabva yatobata tarisiro isu tese tinofarira Apple's automation system. Iyo kamera yekutarisa iyo inobvumidza iwe kuti utarise mhenyu kubva chero kupi, iyo zvakare inoshanda seyekufamba sensor uye inosangana zvisina mushe nechero HomeKit-inoenderana chishongedzo, uye pasina kubhadhara chero gore masevhisi. Zvinonakidza? Zvakanaka, tichazviongorora pazasi.
1 Kamera uye inofamba sensor mune imwechete kifaa
2 Famba mhenyu vhidhiyo kubva chero kupi
3 Imwe app yezvose zvishongedzo
Kamera uye inofamba sensor mune imwechete kifaa
Imwe yeakanyanya hunhu eiyo Omna 180 HD kamera ndeye, sekutaurwa kwezita rayo, yayo 180º kona yekutarisa iyo inobvumidza iwe kutora zvese zvinoitika mukamuri kubva kune diki rakarongeka kona yacho. Makamera mashoma pamusika nhasi ane aya maonero, uye nekuwedzera Tora mufananidzo wepamusoro resolution (1080p) mune ese akakwana uye akaderera mwenje mamiriro, nekuda kweayo yehusiku kuona maitiro. Ehezve, kana iwe uchitsvaga kamera inofarira zoom, iyi modhi haisi yako, zvirinani izvozvi. Kana kana iwe uchida bhatiri, sezvo ichida kuve yakabatana kune socket yekushanda kwayo.
Asi pamusoro pekukwanisa kuishandisa sekamera yekutarisa uye kutora odhiyo yekutenda kune ayo akabatanidzwa maikorofoni, Omna 180 HD se inogona kushandiswa seyenzwi inofamba iwe yaunogona kushandisa neImba app kuti utange chero chiitiko, kungave kuri kuvhenekera yekutandarira mwenje kana kusimudza imba inopofumadza. Kubatanidzwa neKeKitKit kwakwana, uye sarudzo dzekumisikidza kamera dzinotorega iwe kuti usarudze nzvimbo dzekamera yekutarisa kwese kamera ine hanya nekuonekwa kwekufamba.
Famba mhenyu vhidhiyo kubva chero kupi
Uine iyo D-Link Omna 180 HD haufanire kubhadhara kune chero gore rebasa, hakuzove nekubhadhara, kana chero chinhu chakadai. Nechengetedzo iyo HomeKit inokupa iwe, unogona kuwana izvo izvo kamera zvinotora zvinorarama kubva kupi kubva kune yako iPhone, iPad uye kunyangwe kubva kuApple Watch. Neruzha rwepamoyo uye nemukana wekusangoteerera kune zvinotorwa nekamera chete asi zvakare kugona kutaura wega uye kunzwikwa neavo kune rimwe divi. Zviripachena kuti kamera ichafanirwa kubatana newebsite yako yeWiFi kuti ikwanise kuiwana, asi kumisikidza kuri nyore sekugara: tarisa chinamira chinouya neiyo iPhone kamera uye ndizvozvo.
Ko kana ini ndichida kunyora izvo kamera inotora? Pachave pasina dambudziko nekuda kweiyo micro SD slot iyo iwe yaunogona kuwana pazasi pekamera. Iwe unogona kurekodha vhidhiyo chero nguva kamera painowona kufamba, kunyange kugamuchira chiziviso pane yako nhare.
Imwe app yezvose zvishongedzo
Iyo inogadzira inotipa isu kunyorera kwatinogona kudzora akasiyana zvishongedzo, kusanganisira iyo Omna 180 HD kamera. Iyo haina huwandu hwakawanda hwesarudzo, asi kusangana kwayo kwakazara neKeKKit kunovaita vasina basa, saka mugadziri anoita kunge akapa nezvedu zvatingaite neIOS Kumba app uye akasiya chete izvo zvinhu zvakanangana, senge nzvimbo marongero ekufambisa kufamba kana kutarisa zvirimo mukadhi re SD kamera.
Sarudzo dzekumisikidza kwekunzwa kweiyo inofamba sensor kana kuseta iyo nguva yekufamba kwayo, kamera firmware inogadziridza, kumisikidzwa kwesarudzo dzekurekodha pane microSD kadhi uye mamwe marongero epamberi tinogona kuzvimisikidza kubva kuchikumbiro chako, asi chishandiso chinenge chiri chaizvo panguva iyo yekutanga setup. Kubva ipapo dzese sarudzo yekushandisa, kutonga zvisikwa kana kuona mhenyu kunoitwa kubva kuIOS Kumba kunyorera. Mune maonero angu ndicho chinzvimbo chakangwara, kunyangwe hachisi icho chinotorwa nevazhinji vagadziri vanosarudza kutevedzera mabasa.
Ndiyo imwe yekutanga yeKeKit-inoenderana makamera kurova pamusika, uye maficha ayo zviite chinoshamisira chinoshamisira kune avo vanoda kamera yekutarisisa imba yavo kana basa. Iyo yakanakisa yekuona kona ye180 degrees, iyo chiratidzo chehusiku iyo inokutendera iwe kutora mhenyu vhidhiyo murima rakazara nekuda kweiyo infrared ma LED, uye mukana wekuwana iyo vhidhiyo iwe yaunotora mhenyu pasina kumbobhadhara chero yekuwedzera sevhisi inoita kuti mutengo wayo usanyanya kunge wakakwira sezvazvinogona kuratidzika. Une icho chinowanikwa mu Apple Chitoro pamhepo kwe € 229,95.
D-Batanidza Omna 180 HD
Kutarisa kona 180º
Kuwana kubva chero kupi pasina kunyoreswa
Kugona kuwedzera microSD yekurekodha
Hapana ndangariro yemukati
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » D-Link Omna 180 HD, kamera yekuongorora yeKeKKit